Computers & Technology » “ရှေ့ပေါက်တွေက စိတ်မချရဘူး…”	12
-စကားချပ်: ၀မ်းသာသာနဲ့ သူတို့ ပရင်တာ ကြည့်ခိုင်းတာ မကြည့်လိုက်ဖြစ်ဘူး… မိန်းမကို ဖုန်းဆက် ဘာစားမလဲ မေးပြီး… ဆားဗစ်ခ တသောင်း လမ်းစရိတ် ၂ ထောင်ယူပြီး လစ်တော့တာပဲ.. တကယ်တော့ လမ်းစရိတ် ယူလေ့မရှိပါဘူး.. ခုက မိန်းမဆီပြန်ဖို့ နောက်ကျနေပြီကိုး… ဟီး… ပရင်တာကလဲ အိုကေမှာပါ.. အဓိကက ရှေ့ပေါက်မကောင်းလို့လေ.. သူ သုံးတာကလဲ ရှေ့ပေါက်ကိုး… နောက်ကနေ ဆက်ပြီးသုံးလို့ရတဲ့ ကြိုးလဲ ပြောပြပြီးသားဆိုတော့ ကျွန်တော် မမှားပါဘူးနော်…. ရေမြေ့သနင်း
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ဟုတ်တယ်..ရှေ့ကUSB Port တွေက တခါတခါမမိဘူးဗျ
Yae Myae Tha Ninn says: မမိတာထက် ဗို့မမှန်တာဗျ… ကိုယ့်စတစ်လေး လစ်သွားဦးမယ်… နောက်ပေါက်ပြောင်းသုံးပါ.. ဦးမိုက်…
အောင် မိုးသူ says: အနော့် ကွန်ပူတာဆို ရှေ့က လေးပေါက်က နှစ်ပေါက်ပဲကောင်းတယ်။
Yae Myae Tha Ninn says: ဒါဆို ဘုတ်မှာ(Motherboard)မှာ တပ်ထားတဲ့ ကြိုးတခု လွတ်နေတာ ဖြစ်မယ်… ဘကြီးအောင်…
မမချွိ says: နောက် ပေါက် ထိုး ဖို့ က ပိုခက်တယ်လေ
မြစပဲရိုး says: ဟုတ်ပါ့။ နောက်ပေါက်ထိုး ဖို့ က ရှေ့ကို တစ်ကိုယ်လုံး ဆွဲ မထုတ်နိုင်ရင် မမြင်မစမ်း ရမ်းသမ်း စမ်းပြီး ထိုး ရတော့တာ။
Yae Myae Tha Ninn says: အဲဒါကျတော့ အတွေ့အကြုံလေးတော့ လိုတယ်ဗျ…အရီးရ… အနော်ဆို ဓာတ်လိုက်တဲ့နေရာသိတယ်… မလိုက်တဲ့နေရာသိတော့ တန်းပြီး လက်ကလေးနဲ့စမ်းလိုက်တယ်… ဒေါင်လိုက်အပြားပေါက်ဆို USB ထိုးတဲ့နေရာပဲလို့ မှတ်ပြီး ထိုးတော့တာပဲ… :P
Yae Myae Tha Ninn says: ပိုခက်ပေမဲ့ စိတ်ချရတယ်လေ… အနော်ဆိုပိုဆိုး ဗိုက်ထောက်နေလို့… :P အခန့်မသင့်ရင် စတစ်ပျက်တတ်တယ်ဇီဇီရ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: ရှေ့ပေါက်မကောင်းတာဆို…. အမေဘုတ်အစုတ်ကြီးဖြစ်ရမယ်…။
Yae Myae Tha Ninn says: Motherboard စုတ်တာထက် … ကေဇင်(Casing) က ကြိုးတွေ မကောင်းတာများတယ်… ဘုတ်မကောင်းရင် စက်ပါမတက်ဘူးလေ… ကေဇင်ပြောင်းလိုက်ရင် ပြန်ကောင်းသွားပါတယ်… တချို့ဆို ကျွံပါကျွံသွားတယ်… အားပါလို့လေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: ၂ပေါက်စလုံး တလှည့်ဆီ၃ဓါတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်…. ဘိုလိုပြောမဲ မီတူဘူး။။။။
Yae Myae Tha Ninn says: အလျင်လိုရင် သိပ်မကြာဘူးဆိုရင်တော့ ရှေ့ပေါက်နဲ့တင် လိုရင်းရောက်တယ်… နောက်ပေါက်ကျတော့ အချိန်ပေးရတယ်၊ အတွေ့အကြုံလိုတယ်ဗျ… ဒါပေမဲ့ စိတ်ချရတယ်.. အူးကြောင်ပြောသလို ဘိုလိုပြောမဲ မီတူဘူးးးးလေ… တမျိုးစီပေါ့… :P